राजेश हमालको एक दिन | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← आफ्नै घरमा बास बसेका बटुवाले खुकुरी प्रहार गरी हत्या
डिजे साउण्ड सिस्टम र डिस्को लाईटको लागि सम्झनुहोस् !! →
एकताका डायरी लेख्थें । रेगुलर हुन सकेन । २०११ को जनवरीदेखि रेगुलर गर्छु भनेको एक महिना बितिसक्यो, सकिरा’छैन । बत्तीले गर्दा पनि हो । नाइट सुटिङमा गएका बेला लेख्ने कुरै भएन । अरू बेला प्रायः अँध्यारो हुन्छ । के डायरी लेख्नु ? बिहान साढे ६ बजे उठिसक्छु । लगत्तै एक लिटर पानी पिउँछु । बाथरुम गएपछि व्यायाम गर्छु । नाइट सुटिङका बेला भोलिपल्ट साँझमात्रै व्यायाम गर्छु । रातभरि सुटिङ, बिहान सुतिन्छ, ढिलो उठिन्छ ।
व्यायाम मिक्स टाइपको गर्छु । अलिअलि वजन पनि उठाउँछु, बडी बिल्डरले जस्तोचाहिँ होइन । घरमै सानो जिमखाना छ । कहिलेकाहीँ मर्निङ वाक जान्छु, घर नजिकै रानीबारीसम्म । समय नहुँदा घरकै कम्पाउन्डभित्र टहलिन्छु । स्ट्रेचिङ योग गर्छु, जीउलाई लचकदार बनाउन । आफैंले एक घन्टाको कोर्स बनाएको छु । आउट डोर सुटिङ गर्दा यसले निकै काम दिन्छ । होटलकै कोठाभित्र पनि गर्छु ।
ब्रेकफास्ट खाने समय साढे ८ बज्छ । ब्रेकफास्टमा विशेष ध्यान छ । हट लेमनबाट सुरु गर्छु, मह हालेर । दुई/चारवटा फलफूल खान्छु । मेवा सधैं चाहिन्छ । मौसमअनुसारको फलफूल पनि खान्छु । डाक्टरले दिनमा तीन/चार किसिमका फलफूल खाइयो भने स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेको छ । यसपछि कि पोरिज कि त गहुँको मुस्ली दहीमा मुछेर खान्छु । ड्राई पिनट्स, आठ/दसवटा बदाम, पाँच/सातवटा काजु, तीन/चारवटा ओखर खान्छु, अनि कफी पिउँछु । मेरो मुख्य खाना यही हो ।
दिनभरजस्तो सुटिङमै हुन्छु । भात खान्न । तीन/चारवटा उसिनेको अण्डाको सेतो भाग र एक कप कफी खान्छु । कहिलेकाहीँ बिस्कुट र मिल्यो भने एउटा स्याउ । लन्च यति नै हो । घर फर्केपछि मेकअप आफैं उतार्छु । साँझ प्रायः अन्तर्वार्ता, भेटघाट र पार्टी हुन्छ । जानैपर्ने भएमात्र जान्छु । रमाइलोका लागि होइन । नाइट सुटिङ नहुँदा घरमा टिभी हेर्छु । न्युज च्यानल बढी मनपर्छ । राजनीति गर्ने मनसाय नभए पनि चासो दिन्छु । सीएनएन, बीबीसी, अल जजिरा खुब हेर्छु । स्टार मुभिज, एचबीओ, सिने म्याक्स पनि मनपर्छ । आफू कमर्सियल फिल्मका स्टार भए पनि अफट्रयाक फिल्महरू हेर्न रुचाउँछु । हिन्दी च्यानल हेर्दै हेर्दिनँ । यताउति रिमोट चलाउँदा झल्याकझुलुक मात्रै ।
फुर्सदै हुन्न । भइहाल्यो भने किताब पढ्छु । सुटिङको खाली टाइममा पनि । अंग्रेजी किताबहरूमा मन जान्छ । विशेषगरी बायोग्राफी । अचेल अलि फिल्मी किताबहरूमा पनि मन जान थालेको छ- फिल्म मेकिङ र इतिहास’bout । भर्खरै ओबामाको बायोग्राफी सकाएँ । हलिउड फिल्मकर्मी एलिया केजानको बायोग्राफी पढिरा’छु अहिले । फिल्मकर्मीको नाताले बायोग्राफीमा पनि ड्रामा देख्छु । कहिले २/३ वटा किताब सँगैसँगै पढ्छु । घरमा म र सहयोगीहरू छन् । भाइ र उनीहरूको परिवार पनि छ तर एउटै कम्पाउन्डको बेग्लै घरमा ।
तपाईंलाई अनौठो लाग्न सक्छ- मेरो घरमा फोनको कुनै पनि घन्टी बज्दैन । ल्यान्डलाइन पनि मुख्य घरभन्दा अलिकति उता छ । मोबाइल पनि सहयोगी -रोशन हमाल) सँगै हुन्छ । विदेशतिरबाट फोन आयो भने मात्रै ल्याइदिन्छन् । फोनको त्यति प्रेमी छुइनँ । एकताका मोबाइल बोक्थें । चार वर्ष भो छोडिदिएँ । बाहिर फिल्म एकदमै कम हेर्छु । आफ्नै पि्रमियर छ भने मात्रै । कहिलेकाहीँ अफबिट फिल्म लागे जय नेपाल हल जान्छु । अस्ति भर्खरै ‘नो वान किल जेसिका’ र ‘धोबीघाट’ हेर्न गा’थें ।
साँझको खानामा पनि विशेष ध्यान दिन्छु । दुई/चारवटै हरियो तरकारी चाहिन्छ । सागसब्जी । आम नेपालीले जस्तो मज्जाले दालभात ग्वाम ग्वाम मुछेर खान सक्दिनँ । भातमा जोड पनि छैन । प्रायः नाइट पनि सुटिङमै व्यस्त हुने हुँदा सुत्ने टाइमटेबल एकैनासको हुन सकेको छैन ।
एक्काइस वर्ष भएछ, फिल्ममा आएको । कहिलेकाहीँ आफ्ना पुराना फिल्महरू हेर्छु । अनौठो लाग्छ । त्यो बेला आफ्नै हिसाबले हेरिन्थ्यो । अहिले अर्कै भइसकेको छु । आफ्ना पुराना फिल्महरू हेर्दा एकदमै वस्तुगत र निष्पक्ष भएर हेर्छु । कुनै बेला दिउँसो फुर्सद मिल्यो भने घरैमा बस्न नि रुचाउँछु । दिउँसोको माहोलमा आफ्नै घर हेर्दा बेग्लै रमाइलो महसुस हुँदोरहेछ । बाहिर जाने मौका मिले काठमाडौं आसपासमै ड्राइभ गर्छु । अहिले त ट्राफिक जाम देखेर दिक्क लाग्छ ।
लाइफमा बोरिङ कहिले पनि फिल गर्दिनँ । कतै गएर जमघट गर्न, रेस्टुरेन्टमा रमाइलो गर्न मन लाग्दैन । कुनै बेला खुबै रमाइलो पनि गरियो । आठ-दस वर्षयता त्यता चासो जाँदैन । मलाई लाग्छ- जीवन एउटै र्शलीमा कन्टिन्यु (निरन्तर) जान हुँदैन । अध्यायअनुसार फरक एक्टिभिटी हुनुपर्छ । एउटा अध्याय थियो, रमाइलो गरें । अहिले अर्कै अध्यायमा छु, त्यहीअनुसारको जीवनशैली जिइरहेको छु । फेरि चार-पाँच वर्षमा अर्कै शैली अपनाउनुपर्ला । उमेरको मागअनुसार जिउन चाहन्छु । बस ।